About Us - UMongameli Kikkoman Zhenji Foods Co, Ltd.
UMongameli Kikkoman Zhenji Foods Co, Ltd. ngumkhiqizi wamazwe omhlaba nowobungcweti.
Yatshalwa ngokudibeneyo futhi yasungulwa yiKikkoman Corporation kanye ne-Uni-President Enterprise Corporation ngonyaka ka-2008, ngenhlokodolobha ebhalisiwe kwizigidi ezingama-300 zama-China Yuan. UMongameli Kikkoman Zhenji udingidwa eShijiazhuang, inhloko-dolobha yaseHebei Provence, lapho kwenziwa lo mkhiqizo owenziwe eZhaoxian, idolobha elidumile lomlando namasiko. Le nkampani ihweba cishe ngezinhlobo eziyikhulu zemikhiqizo ezigabeni ezi-5 (ie isoso le-soya, uviniga, usawoti obukhulu, iwayini lokupheka nezinye izithokelo), namandla alo okukhiqiza abanzi angamathani ayikhulu.
Imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezimakethe zasekhaya zokusetshenziswa kwasekhaya, izimboni zokupheka nokusebenza, futhi zithunyelwa emazweni amaningi noma ezifundeni ezifana neRussia, Germany, Malaysia, Australia, Turkey, Vietnam, njll. Inkampani yethu igunyaziwe ukusebenzisa i-Kikkoman brand okuyi-soy brand eyaziwa kakhulu emhlabeni, kanye nohlobo lwe-Uni-President okuyi-brand eyaziwayo eTaiwan naseChina Mainland, kanye ne "Zhenji" okuyi-brand yethu ephethwe yiyo, eyaziwa kabanzi embonini yezinkathi eziseChina Bara.
UMongameli Kikkoman Zhenji uthole izitifiketi eziningi ezifuywayo nezakwamanye amazwe, kubandakanya i-ISO9001 (Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi), i-FSSC22000 (Uhlelo Lokuphathwa Kokuphepha Kwezokudla), ISO14001 (Uhlelo Lokulawulwa Kwemvelo), isitifiketi se-non-GMO Sokuqinisekiswa Kwesondlo I-HALAL (IHALAL Certification Food Certified ekhishwe yi-Islamic Association of Shandong ne-MUI), njll.
Ifilosofi yethu yokuphatha, eyokuqala nokubaluleke kakhulu "yiza amakhasimende-kuqala", futhi ikhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokuphepha, inomthelela emphakathini wendawo ngenkathi yenza abasebenzi bajabule.
Ngokubeka kuqala kuqala ikhwalithi, inkampani yethu izinikela ekuthuthukisweni kwezobuchwepheshe embonini yokwalusa, ihlinzeka izinsizakalo zabathengi ngenhliziyo yonke, yenza umsebenzi wayo futhi inikela emphakathini ngobuhlakani.